PANASONIC IMT VISLINK နှင့်အတူ wirelless သွား | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » PANASONIC IMT VISLINK ကြိုးမဲ့ဝင်
Sarasota, FL, မေ 31, 2018 - xG နည်းပညာ, Inc ( "xG" ဒါမှမဟုတ် "ကုမ္ပဏီ") (Nasdaq: XGTI, XGTIW), အဘယ်သူ၏ IMT Vislink တံဆိပ်တွေကထုတ်လွှင့်, တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးစျေးကွက်များတွင်တိုက်ရိုက်ဗွီဒီယိုကိုဆက်သွယ်ရေးအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်များအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုကြသည်တစ်ခုအဆုံးမှအဆုံးသို့ဖွင့်, ယနေ့ Panasonic ကစတူဒီယိုကင်မရာအကွာအဝေးသို့ပေါင်းစည်း IMT Vislink ရဲ့ပြင်ပကြိုးမဲ့ဖြေရှင်းချက်မြင်ရပါလိမ့်မည်ကြောင်း Panasonic ကအတူမိတ်ဖက်ကိုကြေညာ ဗီဒီယိုရိုက်, ဂီယာနှင့်အမျိုးမျိုးသောထုတ်လွှင့် application များအတွက်လုပ်ငန်းအသွားအလာကိုခံရကြ၏။
Panasonic ကရဲ့ AK-UC4000 လည်းကင်မရာကိုဦးခေါင်းကနေ 2018G-SDI ရလဒျတစျခုကနေတဆင့် 4K output ကိုများအတွက်စွမ်းဆောင်နိုင်မှုတို့ပါဝင်သည်တံ့သော, စက်တင်ဘာလ 12 အတွက်ဆော့ဖ်ဝဲကိုအဆင့်မြှင့်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ အဆိုပါ IMT Vislink HCAM transmitter ကိုနှင့်အတူပေါင်းစပ်သောအခါ, AK-UC3000, AK-HC5000 နှင့် AK-UC4000 အားလုံးအပြည့်အဝခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ် HD အဆိုပါ UC4 နှင့် UC3000 သုံးပြီး 4000K ဂီယာနှင့်အတူကြိုးမဲ့ဗီဒီယိုကိုထုတ်လွှင့်။
ဒင်း Chettra, IMT Vislink မှာဂလိုဘယ် Channel ကိုမန်နေဂျာကပြောပါတယ် "ဟု The HCAM ထိုကဲ့သို့သော ENG နှင့်အားကစားထုတ်လွှင့်အဖြစ် applications များထောက်ပံ့, HEVC 4K UHD ကြိုးမဲ့က transmitter ရဲ့နောက်မျိုးဆက်ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ အလွန်အမင်းပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့် Configure လုပ်လို့ရတဲ့အထိုင် options နဲ့ထိုးထွင်းသိမြင်သောဗီဒီယို interfaces နှင့်တကွကြွလာရသော HCAM, ကင်မရာများထုတ်လွှင့်ဖို့တပ်ဆင်ထားနိုင်ပါတယ်, ENG ကင်မရာများနှင့် prosumer ကင်မရာများသည်၎င်း၏စျေးကွက်အယူခံဝင်ကိုတိုးချဲ့။ "
Stefan Hofmann, Panasonic ကမှာအရောင်းအင်ဂျင်နီယာမန်နေဂျာအသုံးပြုသူ-လဲလှယ် RF module တွေနှင့် software ရွေးချယ်စရာတစ်ခုအကွာအဝေးနှင့်အတူ "ဟုဆိုသည် HCAM IMT Vislink ထံမှဆန်းသစ်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ကြိုးမဲ့ကင်မရာစနစ်များ၏လိုင်းနေဆဲဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများကကျနော်တို့ကိုသယ်ဆောင်ထားသောဖွံ့ဖြိုးရေးပူးတွဲသူတို့တိုက်ရိုက်ကြိုးမဲ့ထုတ်လွှင့်မှုအတွက်ချောမွေ့လုပ်ငန်းအသွားအလာရှိသည်သေချာပါလိမ့်မယ်ကွောငျးတှေ့မညျဖွစျကွောငျးထင်ပါတယ်။ "
အဆိုပါ HCAM dual-SFP module တွေကို Quad3/6/ 12G SDI ထောက်ပံ့ futureproof, လဲလှယ်တပ်ဆင်ထား /HDMI/ Fiber Optic /SMPTE 2022-6 HDIP ကိုကျော် -SDI တစ်ဦးဆက်ကပ်အပ်နှံကို Android နှင့် iOS application ကိုကနေတဆင့်ထိန်းချုပ် interfaces အဖြစ်ကို Wi-Fi နှင့် Bluetooth (r) ။
IMT Vislink လက်ရှိတွင် AK-UC3000 နှင့် AK-UC4000 ၎င်း၏ပြင်ပကြိုးမဲ့ဖြေရှင်းချက်တင်ပို့နေသည်။ ဤသည်ကို support သောတည်ဆဲ HCAM transceiver ကိုယူနစ်ပေါ်တွင်အခြေခံသည် HD နှင့် switchable အခြေခံပေါ်မှာ UHD ။
xG နည်းပညာရဲ့ IMT နဲ့ Vislink အမှတ်တံဆိပ်တိုက်ရိုက်ဗွီဒီယိုကိုဆက်သွယ်ရေးအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်များအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုကြသည်နှင့်အထုတ်လွှင့် / အားကစား / ဖျော်ဖြေရေးအတွက်ဆင့်-1 ဖောက်သည်ပေးသွင်းယုံကြည်စိတ်ချကြသည်နှင့်ဥပဒေစိုးမိုးရေး public / ဘေးကင်းလုံခြုံမှု / ကာကွယ်ရေးစျေးကွက်။ သူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ထူးချွန်စွမ်းဆောင်မှုများအတွက်အသိအမှတ်ပြုနေကြတယ်, ယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်အရည်အသွေးတည်ဆောက်လည်ပတ်မှုပ္ပံနှင့်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းပုံစံအချက်များတိုးချဲ့။ ယင်းအသံလွှင့်, အားကစားနှင့်ဖျော်ဖြေရေးကဏ္ဍများ, IMT နဲ့ Vislink အတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရသောတိုက်ရိုက်ဖြစ်ရပ်ဗီဒီယိုဖိုင်, ဖမ်းယူထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲရန် high-definition ဆက်သွယ်ရေးလင့်များသည်။ အဆိုပါဥပဒေ, အများပြည်သူဘေးကင်းလုံခြုံမှု & ကာကွယ်ရေးစျေးကွက်မှာတော့ IMT နဲ့ Vislink လုံခြုံသောဗီဒီယိုဆက်သွယ်ရေးနှင့်ဒေသခံအမျိုးသားရေးနှင့်နိုင်ငံတကာအေဂျင်စီများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများမှမစ်ရှင်-ဝေဖန်ဖြေရှင်းချက်ပေးသညျ။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များမှာတွေ့နိုင်ပါသည် www.imt-solutions.com နှင့် www.vislink.com.
xG လည်း xMax, operating ပတ်ဝန်းကျင်မှာတောင်းဆိုအတွက်မစ်ရှင်-စိတ်ချပါကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှုကယ်တင်မယ့်လုံခြုံ, လျင်မြန်-လုပ်ငန်းတွေစတင်ဖို့မိုဘိုင်းဘရော့ဒ်ဘန်းစနစ်၏ဆော့ဖ်ဝဲရေးသူဖြစ်ပါတယ်။ xMax အထူးသခန့်မှန်းရခက်အခြေအနေတွေနှင့်အရည်အခြေအနေများကာလအတွင်းအသုံးပြုရန်တစ်ဦး Expeditionary နှင့်အရေးပါဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်ကိုအဖြစ်အစေခံရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်။ ဤသည်ကဘေးဥပဒ်ကိုတုံ့ပြန်မှု, အရေးပေါ်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ကာကွယ်ရေး application များအတွက်ဆွဲဆောင်မှုဖြေရှင်းချက်စေသည်။ xMax အကြောင်းကိုပိုမိုသိရှိလိုပါကမှာတွေ့နိုင်ပါသည် www.xgtechnology.com/system-overview/။ အထက်ပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိုင်းများအပြင်, xG တစ်ဦးဆက်ကပ်အပ်နှံဖက်ဒရယ်ကဏ္ဍအဖွဲ့ (xG ဖက်ဒရယ်) အမျိုးသားကာကွယ်ရေး, သိပ္ပံနည်းကျသုတေသနများနှင့်အခြားဖက်ဒရယ်အဖွဲ့အစည်းများမှလာမယ့်မျိုးဆက်လှိုင်းခွဲဝေမှုဖြေရှင်းချက်ပေးအာရုံစိုက်လာခဲ့သည်။ xG ဖက်ဒရယ်အကြောင်းကိုအပိုဆောင်းသတင်းအချက်အလက်မှာတွေ့နိုင်ပါသည် www.xgtechnology.com/technology/xg-federal/.
Panasonic က System ကိုဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီဥရောပ (PSCEU) အကြောင်း
Panasonic က System ကိုဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီဥရောပရဲ့ (PSCEU) ရည်မှန်းချက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၏အလုပ်လုပ်ကိုင်ဘဝတွေကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်နဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုဦးဆောင်သည့်နည်းပညာမှတဆင့်မိမိတို့၏အဖွဲ့အစည်းများ '' ထိရောက်မှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကူညီဖို့ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်တို့အဖွဲ့အစည်းများ, ဖမ်းယူတွက်ချက်နှင့်သတင်းအချက်အလက်အမြိုးမြိုးဆကျသှယျကူညီ: ပုံရိပ်, အသံများနှင့်စာသားဒေတာ။ 350 န်ထမ်းများ, အင်ဂျင်နီယာဒီဇိုင်းကျွမ်းကျင်မှု, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီမံကိန်းကိုစီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များနှင့်တစ်ဦးကြီးများဥရောပမိတ်ဖက်ကွန်ယက်ကိုလှည့်ပတ်နှင့်အတူ, PSCEU က၎င်း၏စျေးကွက်များတွင်ပြိုင်ဘက်ကင်းစွမ်းရည်ပေးထားပါတယ်။
•အသံလွှင့် & ProAV ဝေးလံခေါင်သီကင်မရာဖြေရှင်းနည်းများ, Switcher, စတူဒီယိုကင်မရာဖြေရှင်းနည်းများနှင့် ENG P2 ၏ဧရိယာများတွင် End-အသုံးပြုသူများချောမွေ့စစ်ဆင်ရေးနှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ကုန်ကျစရိတ်-performance ကိုသေချာစေရန်အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများပေးထားပါတယ်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဗီဒီယိုကင်မရာများ၏ VariCam လိုင်း-up, စစ်မှန်တဲ့ 4K သူတို့ကိုရုပ်ရှင်ရုံ, ရုပ်မြင်သံကြား, မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်များနှင့်တိုက်ရိုက်ဖြစ်ရပ်ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်စံပြဖြေရှင်းချက်ကို High Dynamic Range (HDR) ၏နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။
•ဆက်သွယ်ရေး Solutions ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စကင်နာ, Telephony စနစ်များနှင့် SIP terminal ကို devices များအပါအဝင်ကမ္ဘာကဦးဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဖြေရှင်းချက်ပေးပါတယ်။
• Computer ကိုကုန်ပစ္စည်း Solutions မိုဘိုင်းလုပ်သားများ Toughbook ကြမ်းတမ်းမှတ်စုစာအုပ်၎င်း၏အကွာအဝေးနှင့်အတူကုန်ထုတ်လုပ်မှု, Toughpad စီးပွားရေးလုပ်ငန်း Tablet နှင့်အရောင်းအီလက်ထရောနစ်အမှတ် (EPOS) စနစ်များတိုးတက်ကောင်းမွန်လာကူညီပေးတယ်။ ဥရောပစျေးကွက်ခေါင်းဆောင်များအဖြစ်, Panasonic က Toughbook ကြမ်းတမ်းနှင့်တာရှည်ခံမှတ်စုစာအုပ်၏ရောင်းအားတစ် 67% ဝင်ငွေရှယ်ယာခဲ့နှင့် Panasonic Toughpad 56 အတွက်ကြမ်းတမ်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆေးပြား (VDC သုတေသနမတ်လ 2016) ၏ရောင်းအားတစ် 2017% ဝင်ငွေရှယ်ယာကျင်းပခဲ့တယ်။
•စက်မှုဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Vision ၏ထိုကဲ့သို့သောဆေးဘက်ဆိုင်ရာ, အသက်ရှင်ခြင်းကိုသိပ္ပံ, ProAV သို့မဟုတ်စက်မှုဇုန်အဖြစ်အမျိုးမျိုးသောအစိတ်အပိုင်းများအဘို့အပလီကေးရှင်းပေးပါသည်။ အဆိုပါထုတ်ကုန်အစုစုကိုပြည့်စုံနှင့် OEM အသေးစားကင်မရာဖြေရှင်းချက်ပါဝင်သည်။ end-အသုံးပြုသူများသည်စနစ်ပေါင်းစည်းသို့မဟုတ်ဖြန့်ဖြူးအပြည့်အဝထုတ်ကုန်ဖြေရှင်းနည်းများနှင့်အစိတ်အပိုင်းရူပါရုံကိုနည်းပညာတစ်ခုအကွာအဝေးကနေရွေးချယ်နိုင်သည်။
ဗီဒီယိုကစောင့်ကြည့်ကင်မရာနှင့်အသံဖမ်း, ဗွီဒီယိုအင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေးစနစ်များနှင့်ကျူးကျော်နှိုးစက်များအပါအဝင်•လုံခြုံရေး Solutions ။
•ပရိုဂျက်နှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် display တွေအပါအဝင် Visual System ကိုဖြေရှင်းနည်း။ Panasonic က Visual ထုတ်ကုန်များ၏အကျယ်ဆုံးအကွာအဝေးကမ်းလှမ်းနှင့် 37.20% ဈေးကွက်ဝင်ငွေဝေစု (Futuresource အ> 5klm (FY16 ဧပြီလ 2015 နှင့်အတူဥရောပမြင့်မားသောရောင်ခြည်ပရိုဂျက်တာစျေးကွက်ဦးဆောင် - ။ မတ်လ 2016, excl 4K & ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ရုံ) ။
Panasonic ကကော်ပိုရေးရှင်းကွဲပြားခြားနားအီလက်ထရွန်းနစ်နည်းပညာများနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများဖောက်သည်များအတွက်စားသုံးသူအီလက်ထရောနစ်အတွက်, အိုးအိမ်, မော်တော်ကားနှင့် B2B စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ 100 အတွက်၎င်း၏ 2018th နှစ်ပတ်လည်နေ့ကိုဂုဏ်ပြုသော, ကုမ္ပဏီတကမ္ဘာလုံးတိုးချဲ့ခဲ့ပြီးယခုမတ်လ 495, 91 အဆုံးသတ်နှစ်အတွက်ယူရို 61.711 ဘီလီယံပေါင်းစုအသားတင်ရောင်းချမှုမှတ်တမ်းတင်, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း 31 ခွဲများနှင့် 2017 ဆက်စပ်ကုမ္ပဏီများမှလုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ တိုင်းလိုင်းများကိုဖြတ်ပြီးဆန်းသစ်တီထွင်မှုမှတဆင့်တန်ဖိုးအသစ်လိုက်ရှာဖို့ကျူးလွန်ခဲ့သော, ကုမ္ပဏီပိုကောင်းတဲ့ဘဝနှင့်၎င်း၏ဖောက်သည်များအတွက်ပိုကောင်းတဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုဖန်တီးရန်၎င်း၏နည်းပညာများကိုအသုံးပြုသည်။ Panasonic ကအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်: www.panasonic.com/global ။
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ IMT isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော panosonic SoftAtHome, MStar, CES2017 လှံ & Arrows တီဗီနည်းပညာ က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် xG နည်းပညာ 2018-05-31
ယခင်: Edmonton ရဲတပ်ဖွဲ့ဝန်ဆောင်မှု CatDV ပေးခဲ့သည်ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ 200,000 ဗီဒီယိုပိုင်ဆိုင်မှုများ၏မှတ်တိုင်ရောက်ရှိ
နောက်တစ်ခု: VITEC နှင့် ATX ကွန်ယက် Partner လုပ်ငန်းနှင့်အားကစားဆိုင်ရာနေရာ IPTV ဖြန့်ကျက်မှုအတွက်အဆုံး-to-end အကြောင်းအရာလုံခြုံရေးဝေငှရန်